किन रद्द भयो ठेक्का ? – Nepalpostkhabar
Hemant KC । २० चैत्र २०७६, बिहीबार ०७:२५ मा प्रकाशित
खरिद प्रक्रिया दुई महिनासम्म अलपत्र पारेर, तीन घन्टाभित्र नयाँ निर्णय गराएर विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको कम्पनीले अन्ततः सरकारलाई मात्र होइन, नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई धोका दिएको छ, प्रयोगशालाका प्राविधिक र डाक्टरले सामग्री प्रयोग गर्न नमानेपछि ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य, अब नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ सामान आउन करिब दुई साता
१ ) गुणस्तरहीन किट, प्रयोग गर्न प्रयोगशालाद्वारा अस्वीकार
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा।रुणा झाले चीनबाट ल्याएका किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले मान्यता नदिएकाले परीक्षण गर्न नसकिने बताइन् । ‘कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने किटहरू भर्खर बजारमा आएका छन् । कुनै अनुसन्धान भएको छैन् । डब्ल्युएचओले मान्यता नै नदिएका यस्ता किट हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् । किट खरिद प्रक्रियामा पनि निर्देशक झाले सहमती जनाएकी छैनन् । खरिद स्वीकृतीको निर्णयमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेकी छै्रनन् । ‘यि किट किन र कसरी खरिद गरिए त्यसको उत्तर म दिन सक्दिनँ, समयले देला,’ उनले भनिन् ।
डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार नभएको र प्रयोगशालाको सल्लाहअनुसार ती किट प्रयोग नगर्ने निष्कर्षमा पुगिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘किटहरू त प्रयोग नगर्ने कुरा भयो । डब्ल्युएचओ र प्रयोशशालाले समेत प्रयोग गर्नुहुँदैन भनेपछि त्यहीअनुसार निर्णय भएको छ । ’
२) अपूरो पिपिई लगाउन स्वास्थ्यकर्मीले मानेनन्
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) पनि अपूरो आएको छ । टोपी, चस्मा, गाउन, पन्जा, सुज लगाएको सेट मिलेर पिपिई बन्छ । प्रदेश १ विराटनगर र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई खबर पठाएका छन्, ‘तर, सरकारले किनेको पिपिईको सेटमा कतै चस्मा छैन, कतै सुज छैन, कतै गाउन नै छै , त्यसैले यो प्रयोग गर्न सकिँदैन ।’ स्वास्थ्यकर्मीले पिपिई फिर्ता लिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
३ ) अब नयाँ प्रक्रिया सुरु, सामग्री आउन करिब दुई साता
लामो समयसम्म निर्णय नगरेको सरकारले जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर ओम्नीलाई सीधै ठेक्का दिएको थियो । शुक्रबार ठेक्का दिएको सरकारले शनिबार जहाज चीन पठाएर आइतबार सामान काठमाडौं झारेको थियो । तर, गुणस्तरहीन सामान अपारदर्शी ढंगले महँगोमा किनेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । सरकारले अब फेरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नियमसंगत प्रक्रिया गरेर नयाँ सामान ल्याउन अब करिब दुई साता लाग्नेछ । कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता हुन कति दिन लाग्ने हो रु सम्झौता भएको पनि करिब १० दिनपछि मात्र काठमाडौंमा सामान ल्याउन सम्भव हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । यसरी कम्तीमा दुई साता नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
४ ) ठेकेदार कालोसूचीमा पर्ने, निर्णय गर्नेलाई छुट ?
उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल भन्छन्–डाक्टरहरू के–के भन्छन्, मैले बुझेको छैन
स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि सरकारकै अंग हो । त्यसको नेतृत्वमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सम्झौता किन रद्द भयो र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई चासो छ नि ?
तर, एकातिर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै बजारभाउभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर सम्झौता गरेको स्वीकार्नुभएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूले अहिले आएको टेस्टिङ किट प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ